Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeNauru Breaking » Abongameli baseNauru nasePalau batyikitye i-ASA, ithuba elitsha lezokhenketho
Airlines • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeNauru Breaking • iindaba • Iindaba zePalau Breaking • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
INauru nePalau ngamazwe amabini azimeleyo kuLwandlekazi lwePasifiki eseMazantsi.
Ngokusebenza kunye abantu baseNauru baya kufumana ukufikelela ngokulula kungekuphela ePalau, kodwa naseTaiwan nakweminye imimandla kulwandle olukude lwePasifiki.
Abongameli baseNauru nasePalau batyikitye isivumelwano seenkonzo zomoya (ASA) esiza kubona ukuqala kokuhamba phakathi kwamazwe amabini aseMicronesia nangaphaya, nge-2 kaSeptemba.
The UMongameli weNauru Lionel Aingimea Ukutyikitywa kwesivumelwano kubonisa ubudlelwane obunzulu nobuhlobo phakathi kweNauru nePalau, “kodwa nakwingingqi enkulu yaseMicronesian.”
Isivumelwano seenkonzo zomoya asizukuqinisa kuphela unxibelelwano phakathi kwamazwe amabini eziqithi kodwa sinike nethuba lokwandisa izibonelelo zoqoqosho kuzo zombini izibonelelo zamazwe ethu.
"UNauru uzibophelele ekuphuculeni indima yabo kwicandelo lezothutho kwingingqi, kwingingqi nakwamanye amazwe," utshilo uMongameli u-Aingimea.
Mongameli Palawu, USurangel Whipps, Omnci, uthi ilizwe lakhe lijonge phambili kumhla apho iinkonzo zomoya zingabuyiselwa khona, ekhumbula isiganeko se-medivac ngo-1987 ngelo xesha, u-Air Nauru, waphendula umnxeba wokuqhuba inqwelo-moya esuka ePalau ukuya eManila.
"Njengokuba isiqithi esincinci sisitsho nolwandle olukhulu, enye yezinto… siyaqonda ukuba, ngaphandle kolu nxibelelwano nehlabathi langaphandle, sodwa, kwaye amaxesha amaninzi sisexesheni leenqwelo moya kunye neenkampani mhlawumbi umdla wabo awuhambelani nomdla wethu, ”utshilo uMongameli Whipps.
Uhambisa athi ukuseka i-ASA lithuba "lokusebenza kunye njengabazalwana basePasifiki" kunye nokubona iiNauru Airlines zibe ngabaphethe ngempumelelo kwaye zonyusa iinkonzo zabantu.
Ezi nkokeli zimbini ziyawaqonda amathuba anokubonelelwa ngumntu ngamnye ekunxibelelaniseni iAsia, nentshona, kunye nomzantsi.
Okwangoku, uNauru uthatha amanyathelo asekhaya ukuphucula iinkonzo zokunxibelelana ngenqwelomoya kunye nolwandle.
Izibuko laseNauru liyaphuculwa ukufezekisa imigangatho yamazwe aphesheya ngelixa ukuthengwa kweenqwelomoya zeBoeing 737-700 kwakutshanje kuya kuhlala ixesha elide, kufikelela nakwezinye iindawo.
Umsebenzi wokulungiselela nawo uyaqhubeka ukuvuselela umgaqo wenqwelomoya kwisikhululo seenqwelomoya oya kuqinisa ukhuseleko kwezokuhamba ngenqwelomoya kunye nokuthotyelwa kunye nokubeka indawo yeNauru yokwanda kwezothutho lomoya kwixesha elizayo.
Isivumelwano sithi iNauru nePalau bakhumbula ubudlelwane obusondeleyo obubopha la mazwe mabini, kunye nomnqweno wabo wokubonelela ngesakhelo sokuqhutywa kweenkonzo zomoya.
La mazwe mabini ayayamkela indima yeqhinga lothutho lomoya lwamazwe aphesheya kuphuhliso oluzinzileyo loqoqosho lwesiqithi, ngakumbi ngokukhuthaza urhwebo, urhwebo, nokhenketho.
La mazwe mabini ayasazi isidingo sokuphucula inqanaba, umgangatho kunye nokusebenza kweenkonzo zothutho lomoya ngaphakathi nangaphaya kwamazwe abo.
Umongameli u-Aingimea uvakalise umbulelo ongazenzisiyo ku-Mongameli u-Whipps egameni likarhulumente ngenqwelomoya yenqwelomoya yakutshanje ethwele abaguli abangama-34 base Nauru kunye nabakhaphi beza eTaiwan besuka eNauru ngesicwangciso sobuchule sokumisa i-Yap State.
Ingxaki yokufaka amafutha kwakuthetha ukuba abasebenzi beenqwelomoya kunye nabakhweli bafuna ukulala ubusuku bonke, kwaye iPalau, ixhotyiswe ngcono ngendawo yokuhlala kunye neemfuno zokuhamba ngenqwelomoya, yasusa inqwelomoya kunye nabagibeli bayo abagonyelwe yi-COVID ukuba bahlale emhlabeni kwaye bachitha ubusuku, ngaphambi kohambo lwabo lokuya eTaiwan.